January 2017 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
सर्वोच्चमा थपिए दुई न्यायाधीश, एक पद अझै रिक्त
1/31/2017 05:19:00 PM समाचार
काठमाडौं,माघ १८ गते । सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश थपिएका छन् । यससँगै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित २० न्यायाधीश भएका छन् ।
न्याय परिषदको सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तेजबहादुर केसी र पुरुषोतम भण्डारीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेकी हुन् ।
केसी र भण्डारीले मंगलबार नै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष सपथ लिएका छन् । यसअघि केसी उच्च अदालत विराटनगर र भण्डारी पोखराका मुख्य न्यायाधीश थिए ।
एक पद अझै रिक्त
नयाँ संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्छ । तर, मंगलबार दुई न्यायाधीश थपिएपछि पनि यो संख्या पुग्दैन । एक पद रिक्त छ ।
न्याय परिषदले केसी र भण्डारीको नाम सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायले उमेर हदका कारण अवकास पाएकाले यो पद रिक्त भएको हो ।-अनलाइनखबर
1/31/2017 04:40:00 PM समाचार
प्यालेटाइनी राष्ट्रपति अब्बास पाकिस्तान भ्रमणमा
1/31/2017 04:28:00 PM विश्व
इस्लामाबाद, माघ १८ गते । प्यालेटाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास तीन दिन भ्रमणको क्रममा पाकिस्तान आउनु भएको छ ।
इस्लामाबादमा बनेको प्यालेटाइनको नयाँ राजदूतावास भवन उदघाटन गर्नको लागि उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्. ।
पाकिस्तानको राजधानीमा सोमबार आइपुग्नु भएको राष्ट्रपति अब्बासको साथमा पाँच मन्त्रीसहित १७ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल रहेका जनाइएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपनि मम्नून हुसैनले प्यालेटाइनी राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।
अब्बासको यो तेस्रो पाकिस्तान भ्रमण हो । यस अघि उहाँले २००५ र २०१३ मा पाकिास्तानको भ्रमण गर्नु भएको थियो ।
प्यालेटाइनी राष्ट्रपतिको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्यालेटाइनी राष्ट्रपतिका साथैमा रहेका प्रतिनिधि मण्डलले पाकिस्तानी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने र दुई देशका नेताहरुबीच द्विपक्षीय हितका विषयमा वार्ता हुने बताइएको छ । रासस ÷सिन्ह्वा
1/31/2017 12:28:00 PM समाचार
काठमाडौं,माघ १८ गते । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) कार्यक्रम समितिको ५३औँ बैठक बुधबार सुरू हुँदैछ ।
सार्क अध्यक्षका नाताले नेपालले कार्यक्रम समितिको बैठक आयोजना गर्न लागेको हो । सार्क सचिवालयको सक्रियतामा हुन लागेको उक्त बैठकमा आठ वटै सदस्य मुलुकका परराष्ट्र, विदेश-बाह्य मामिला मन्त्रालयमा क्षेत्रीय सङ्गठनको जिम्मेवारी पाएका सहसचिवले भाग लिनेछन् ।
पाकिस्तानमा आयोजना हुने सार्क शिखर सम्मेलन स्थगन भएकाले अध्यक्षता हस्तान्तरण नभएको नेपालले उक्त बैठक आयोजना गर्नुपरेको हो । रासस
भोजपुरमा दुईहजार भन्दा बढीले नाम दर्ता गरे
1/31/2017 12:20:00 PM पूर्वाञ्चल खबर
भोजपुर माघ १८ गते । फोटोसहितको मतादाता नामावली सङ्कलनमा भोजपुरका दुई हजार तीनजना मतदाताले हालसम्म नाम दर्ता गराएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भोजपुरले निर्धारण गरेको ७५ दर्ता स्थलमा नाम दर्ता गराएकामध्ये ७९७ महिला र एकहजार २०३ पुरुषले नाम दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी दिव्यश्वरी जोशीले बताउनुभयो ।
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ बमोजिम मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको फोटोसहितको नामावली समावेश गर्ने, नाम हटाउने, सार्ने र सङ्कलन भएको नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउनेलगायतको कार्य भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नामावली सङ्कलन र अध्यावधिकका लागि निर्वाचन कार्यालयले छवटा टोलीलाई परिचालन गरेको छ । गत पुस १० गतेदेखि यही माघ २० गतेसम्म नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिकको कार्य गरिनेछ । रासस
थ्रेस होल्ड नराख्न माग गर्दै देउवा निवास पुगे साना दल
1/31/2017 12:17:00 PM समाचार
काठमाडौं,माघ १८ गते । साना दलहरुले थ्रेस होल्ड नराख्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेकपा माले, नेमकिपा लगायतका साना दलका सांसदहरुले मंगलबार बिहान देउवालाई भेटेका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित मत नल्याएसम्म सांसद नपाउने व्यवस्था भएको र यो नै एक प्रकारको थ्रेस होल्ड भएको भन्दै उनीहरुले अर्को व्यवस्था नगर्न माग गरे ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा झण्डै २० हजार मत ल्याएका दलले एक सभासद पाएका थिए । अब झण्डै ९० हजारदेखि १ लाखसम्म मत ल्याउनेले मात्र सांसद पाउने भन्दै साना दलले अर्को छुट्टै व्यवस्था नगर्न आग्रह गरे ।
गृह मन्त्रालयले ल्याएको राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकमा थ्रेस होल्डको प्रस्ताव नभएको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘अहिले संशोधन हालेर थ्रेस होल्ड राख्न खोजिएको छ । यो निर्दलीय व्यवस्था फर्काउने प्रयास हो ।’
जवाफमा देउवाले यसबारे छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।-अनलाइनखबर
1/31/2017 12:13:00 PM खेलकुद
1/31/2017 12:09:00 PM आर्थिक
1/31/2017 12:06:00 PM समाचार
1/31/2017 12:03:00 PM विश्व
लाहोर – भारतको मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमलाका मास्टर माइन्ड मानिएका हाफिज सइदलाई हिरासत राख्न पाकिस्तानी अधिकारीहरुले निर्देशन दिएका छन् ।
सन् २००८ मा भएको उक्त आतंकवादी हमलामा १६६ जना मारिएका थिए ।
लस्कर ए ताइबा (एलइटी) नामक प्रतिबन्धित विद्रोही समूहको नेतृत्व गरेका सइदमाथि १ करोड अमेरिकी डलरको इनाम राखिएको थियो । उनी हाल लाहोरस्थित घरमै हिरासतमा रहेका छन् ।
उनले भने उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका छन् ।
तर, नयाँ दिल्ली र वासिङटनले भने सइद नै उक्त घटनाको मास्टरमाइन्ड भएको भएको बताउँदै आएका छन् ।
सइदका प्रवक्ताले अमेरिकाले दबाब दिएपछि पाकिस्तानी सरकार उनलाई हिरासतमा राख्न बाध्य भएको दाबी गरे ।
सइदले जमाद उद दावा नामक परोपकारी संस्था नेतृत्व गर्छन् जसलाई भारत र अमेरिका एलइटीको संरक्षक मान्छन् ।
एलइटीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आतंकवादी संगठनको रुपमा पहिचान गरेको छ भने सन् २०१५ मा पाकिस्तानले पनि यसलाई आतंकवादीको सूचीमा रहेको थियो ।
सइद खुल्लमखुल्ला पाकिस्तानमा हिँडिरहेको कारण नै दिल्ली र इस्लामाबादबीच लामो समयदेखि कटु सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । अहिले आएर किन पाकिस्तानले यस्तो निर्णय लियो भन्ने कुरा अझै यकिन भएको छैन ।
सन् २००८ मा भएको हमला पछि पनि उनलाई ६ महिना घरमा नै हिरासतमा राखिएको थियो । तर ६ महिनापछि उनलाई रिहा गरिएको थियो ।
पाकिस्तानले उनीमाथि मुद्दा चलाउन वा भारतलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रमाण नभएको बताएको थियो ।
सन् २००८ को नोभेम्बर ६ मा भएको उक्त हमलामा पाकिस्तानबाट आएका १० जना आतंकवादीले मुम्बाईका विभिन्न स्थानमा बम हमला तथा गोलिबारी गरेको थियो ।
सहरलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन भारतीय अधिकारीहरुलाई ३ दिन लागेको थियो ।-एजेन्सी
नेपालका ७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा थर्मोमिटर नै छैन
1/31/2017 12:00:00 PM स्वास्थ्य
नेपालका करिब ७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ज्वरो नाप्नको लागि आवश्यक पर्ने थर्मोमिटर समेत उपलब्ध नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन अनुसार मानिसको हृदयको गति, स्वास प्रस्वासको अवस्था जाच्ने उपकरण (स्थेटेस्कोप) २ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छैन । रक्तचाप जाच्ने यन्त्र ६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा नेपालमै पहिलो पटक गरिएको स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा सर्वेक्षण २०१५’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार नेपालका कमै स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्य परिक्षण गर्ने स्थलमा बच्चा (३९ प्रतिशत) वा शिशु (५५ प्रतिशत) को तौल मापन गर्ने स्केल वा प्रकाशको उचित श्रोत उपलब्ध रहेको पाइएको छ । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अत्यावश्यक पर्ने उपकरण तथा औषधिको उपलब्धतामा समेत निकै फरक रहेको पाइएको छ ।
जस अनुसार नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक पर्ने अलबेण्डाजोल (९७ प्रतिशत), जिंक चक्की (९५ प्रतिशत), पुर्नजलिय झोल (९२ प्रतिशत), आइरन चक्की वा फोलिक एसिड (९१ प्रतिशत) प्रशस्त मात्रामा रहेको छ । तर ती औषधिहरु अधिकांश सबै संस्थाहरुमा उपलब्ध छैन ।
त्यस्तै, नेपालका करिब ५१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित विद्युत सेवा उपलब्ध छैन भने करिब २० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मात्र सञ्चारका उपकरणहरु उपलब्ध छ ।
आधारभूत सुविधाहरुमध्य नेपालका ८० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवाग्राहीको लागि चर्पी तथा पानीको श्रोतमा सुधार भएको पाइए पनि विजुली, बत्ती, टेलिफोन (२० प्रतिशत), इमर्जेन्सी यातायात (५९ प्रतिशत) तथा इन्टरनेट सेवा (जम्मा ११ प्रतिशत) लगायतका सुविधामा भने कमी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मुक्तिनाथ खनालले बताए ।
‘नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपलब्ध औषधीहरु तथा अन्य सुविधा हेर्ने हो भने त्यसको अवस्था राम्रो छ’ खनालले भने, ‘तर त्यसलाई सम्रगमा हेर्ने हो भने नेपालमा एक प्रतिशत अस्पतालहरुमा मात्र सरकारले निशुल्क दिने भनेको ७० प्रकारका औषधीहरु मध्य १८ प्रकारका औषधीहरु उपलब्ध रहेको पाइएको छ ।’
उपलब्ध औषधिमा अल्बेण्डाजोल, एमोक्सिलिन, बेन्जोइक, क्लोरम्फेनिकोल, फोलिक एसिड तथा आइरन, भिटामिन ए क्याप्सुल, जेन्टामाइसिन इन्जेक्सन, मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट लगायत छन् ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख पर्शुराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काम नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा यो सर्वेक्षण सार्वजनिकीकरण भए सँगै मन्त्रालयले गरेका काम कारवाही देखिन थालेको बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले यो अध्ययनमा उल्लेख गरिएका थुप्रै विषय ४० देखि ६० प्रतिशतमा सिमित रहेको बताउदै यसलाई विभागले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए ।
चार हजार स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ९६३ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गरिएको सर्वेक्षणमा मन्त्रालयले सेवाको उपलब्धता, सेवाको अवस्था तथा गुणस्तरीय सेवालाई आधार मानेको थियो । जसमा मन्त्रालयले नेपालका सम्पूर्ण जिल्ला लगायत भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई समेत समेटेको थियो ।
कोशी अञ्चल यातायातका लेखापाल घुससहित पक्राउ
1/31/2017 11:57:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
इटहरी, माघ १८ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका एक कर्मचारीलाई घुससहित मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।
लेखापाल भुपेन्द्र कटुवाल घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका हुन् । उनको साथबाट ४० हजार रुपैयाँ घुस बरामद भएको छ ।
लाइसेन्स बनाइदिने भनेर कटुवालले सुनसरीका दुईजना सेवाग्राहीबाट २०-२० हजारको दरले ४० हजार रुपैयाँ घुस लिएको र गोप्य सूचनाको आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार सम्पर्क कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको र उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको भट्टराईले बताए ।-अनलाइनखबर
आवश्यक परे निर्वाचनपछि संशोधनः नेता खनाल
1/31/2017 11:54:00 AM मुख्य समाचार , समाचार
इलाम, माघ १८ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आवश्यक परे मात्र तीनतहको निर्वाचन पछि मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालनअन्तर्गत चार महिने अभियानको क्रममा सोमबार इलामको लक्ष्मीपुर गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी (केन्द्र) सँग देश विकास गर्ने कुनै नयाँ भिजन नभएको बताउँदै उहाँले सरकारले खुट्टा कमाएकाले अझै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेको हो, भन्नुभयो ।
“अब हुने निर्वाचनपछि काँग्रेस र माओवादीलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनपछि एमाले देशकै ठूलो पार्टी हुने र मुलुकलाई सफल तरिकाले हाक्नेछ ।”
सरकारले छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा नगरे निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न एमालेले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरू गर्ने बताउँदै निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा बेथिती बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको प्रमुख पद दिन नसकिने बताउँदै उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव विदेशीको दबाबमा संसद्मा दर्ता भए पनि कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गर्ने ८६ घरका १७५ जनाभन्दा बढीलाई उहाँले आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो । रासस
1/31/2017 11:53:00 AM समाचार
1/30/2017 04:24:00 PM विश्व
1/30/2017 04:22:00 PM समाचार
1/30/2017 04:21:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
1/30/2017 02:32:00 PM अपराध
1/30/2017 01:47:00 PM राजनीति
बेलायती राजदुत र सभामुखबीच भेटवार्ता
1/30/2017 01:31:00 PM समाचार
काठमाडौ माघ १७ गते सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाल र बेलायतबीचको द्धिपक्षीय सम्बन्ध अझै सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । सभामुख घर्तीले नेपालका लागि बेलायति राजदुत रिचार्ड मोरिससँग भएको भेटमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध अझै सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन् ।
राजदुतसँगको भेटपछि संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै सभामुख घर्तीले दुवै देशको संसदका गतिविधि र आपसीहितका विषयमा छलफल भएको जानकारी पनि दिइन् । भेटमा राजदुत मोरिसले नेपालको दिगो विकासमा सघाउन बेलायत सधैं तयार रहेको बताएका थिए ।
बेलायतले नेपालको क्षमता विकासका विभिन्न योजनाहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
1/30/2017 01:23:00 PM आर्थिक
काठमाडौं, माघ १७ गते । नेपाल बायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिदका लागि अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पाेरेसनलाई १० करोड रुपैयाँ बैना दिने भएको छ ।
शुक्रबार जहाज खरिदका लागि एएआर कम्पनी र बायु सेवा निगमबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार दुई वटा विमान खरिदको लागि बायुसेवा निगमले तत्काल १० करोड रुपैयाँ बैना दिँदैछ ।
बायुसेवा निगमका सहायक प्रवक्ता शैलेश कंसकारले भने ‘शुक्रबार दुई नयाँ जहाज खरिदका लागि हामीले एएआर कर्पाेरेसनसँग सम्झौता गरेका छौ, यसै अनुरुप तत्काल १० करोड रुपैयाँ बैनाको रुपमा दिदैँछौ ।’
बायु सेवा निगमले यसरी बैना दिनको लागि यसवर्षको बजेटमा १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।
निगमले दुबै जहाज २०७४ भित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ । सहायक प्रवक्ता कंसकार भन्छन् ‘२०७४ को अन्तसम्ममा दुबै जहाज ल्याउने सोचमा छौ, एउटा जहाज २०१७ को सेप्टेम्बर र अर्काे २०१८ को मार्चसम्ममा ल्याउँछौ ।’
यसरी जुटाउँदैछ स्रोत
जहाज खरिदका लागि निगमले विभिन्न बित्तीय सस्थासँग ऋण लिने भएको छ । सञ्चय कोषसंग भने निगमले २५ अर्ब ऋण सम्झौता गरिसकेको छ । कोषसँग निगमले यो सम्झौताका लागि अर्थ मन्त्रालयले जमानत बस्ने सहमति पनि दिइसकेको छ ।
दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि निगमले असोज पहिलो साता आह्वान गरेको खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका ११ वटा कम्पनीमध्येबाट माघ १ गते एएआर करर्पोरेसन छानिएको थियो ।
अहिले निगमसँग वाइडबडी जहाज छैन । वाइडबडी ल्याएर लामो दूरीमा उडाउने निगमको योजना छ ।-अनलाइनखबर
रेखाको बिहे, तर कोसँग ?
1/30/2017 01:17:00 PM मनोरञ्जन
नायिका रेखा थापाले बिहे गरेकी छिन् । उनले कलाकार दिल श्रेष्ठसँग बिहे गरेकी हुन् । रियल लाइफमा निर्माता छविराज ओझासँग डिभोर्स गरेपछि एक्लै बस्दै आएकी रेखाले रील लाइफमा भने बिहे गरेकी हुन् ।
दोश्रो सेड्यूलमा छायांकन भैरहेको चलचित्र ‘हिरो रिटन्र्स’मा रेखा र नायक दिल श्रेष्ठले बिहे गरेका हुन् । चलचित्रका निर्देशक आशिष भेटवालले फेसबुकमा तस्बिर पोष्ट गर्दै लेखेका छन्-‘आज त भगाउने नै हो ।’
नायक सविन श्रेष्ठको प्रस्तुतीमा तयार भएको यो चलचित्रमा सविनाका साथमा रेखा र दिलको मुख्य भूमिका छ । रेखा र दिलको बिहेको प्रसंगलाई निर्देशकले चलचित्रमा कसरि उतारेका छन्, त्यो भने चलचित्र रिलिज भएपछि नै थाहा हुनेछ । तर, रियल लाइफमा बिहे गर्छु मात्र भन्दै आएकी रेखाले रिल लाइफमा भने बिहे गरेकी छिन् ।-अनलाइनखबर
1/30/2017 01:12:00 PM आर्थिक
प्रचण्डकै शासनमा माओवादी नेता खेप्दैछन् युद्धकालीन मुद्दा
1/30/2017 01:09:00 PM समाचार
ओखलढुंगा, माघ १७ गते । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनाको छानविन गर्ने भनिएको थियो । तर यही प्रकृतिका घटनामा ओखलढुंगा जिल्लामा भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको सिंगो जिल्ला र केन्द्रीय नेतृत्व अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दा खेप्न बाध्य छ ।
माओवादी अध्यक्ष तथा जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र सोही पार्टीका नेता अजयशंकर नायक कानुनमन्त्री भएका बेला सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि गरेको परिपत्रले माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्यदेखि वैद्य माओवादीका जिल्ला नेतासम्म हैरानीमा परेका छन् ।
के हो अदालतको परिपत्र ?
माओवादी युद्ध कालमा ओखलढुंगामा भएका तीनवटा छुट्टाछुट्टै व्यक्ति हत्याका मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ०७२ चैत १२ गतेको आदेशले ब्यूँतिएका छन् । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा ०६७ सालमा अभियोग दर्ता भएका गुरु लुइटेल, मस्त तामाङ र नेपाल प्रहरीका हबल्दार मदन तामाङको हत्या सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको परमादेश खारेज गरेपछि ब्यूतिएका हुन् ।
सर्वोच्चले यस अघि अदालती बन्दोबस्तीको १२ नम्बर अन्र्तगत परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै युद्धकालीन मुद्दा तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै ०६८ जेठ १७ गतेबाट ती मुद्दा जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा मुल्तविमा थिए ।
तीनवटै मुद्दामा २४ जना माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरु प्रतिवादी छन् । पोलिटब्यूरो सदस्यदेखी कार्यकर्तासम्मलाई लगाइएका मुद्दा सक्रिय भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सर्वोच्चले ०७३ मंसिर १४ गते ओखलढुंगा जिल्ला अदालतलाई परिपत्र गर्दै मुद्दा ब्यूँत्याउन भनेको छ । मुल्तवीमा रहेका मुद्दा सर्वोच्चकोे आदेशले अघि बढाउन बाटो खुलेसँगै जिल्ला अदालतले मुद्दा अघि बढाएमा माओवादी केन्द्रका तीन जना पोलिटब्यूरो सदस्य, जिल्ला संयोजकसहितका १५ जना माओवादी नेताहरु जेल समेत जानुपर्ने हुन सक्छ ।
पोकली गाविसका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्वसांसद तथा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीको विषय चर्चामै रहेको समयमा अदालतमा युद्धकालीन मुद्दा सक्रिय हुने भएपछि माओवादी नेतृत्व सशंकित बनेको छ । सोही मुद्दामा अर्का पूर्व माओवादी नेता पुष्कर गौतम अहिले पनि जेल जीवन विताइरहेका छन् ।
(यो पनि पढ्नुहोस्- उज्जन श्रेष्ठ हत्याको रिपोर्ट: गाउँले के भन्छन् ?)
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको नेतृत्वमा तीनपटक सरकार बने पनि उनीहरुका मुद्दा नियमित फौज्दारी कानुन अनुसार नै चलरहेका छन् । सर्बोच्चले ०७२ चैत १२ गतेको आदेशमा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुलाई जारी गरेको वारेन्टका विषयमा कानुनसम्मत भएका कामकारवाही बदर गर्नु औचित्य पूर्ण नहुने भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- ‘यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्च विकल्प खोज्नु न्याय तथा कानुन सम्मत हुँदैन ।’
प्रतिवादीहरुले उत्प्रेषणको आदेशबाट जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि ०७३ मंसिर १४ गते ओखलढुंगा जिल्ला अदालतलाई परिपत्र समेत गरेको छ ।
जिल्ला नेता भन्छन्- प्रचण्ड शासन गर्ने हामी जेल जाने ?
युद्धकालका मुद्दाहरु संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार छुट्टै संयन्त्र बनाएर टुङ्ग्याउने द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । लामो सयम यस्तो संयन्त्र नबने पनि हाल द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बनेर क्रियाशील छन् ।
शान्ति सम्झौता अनुसार नै यी मुद्दाहरु पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने ती मुद्दाका आरोपित माओवादी नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तीन ओटै हत्याका घटनामा प्रतिवादी बनाइएका माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा ओखलढुंगाका संयोजक मोहन खड्काले नियमित फौज्दारी कानुन अनुसार मुद्दा चलाए युद्धकालका जनअदालत ब्यूताउने चेतावनी दिए ।
उनले ती घटना पार्टीको अदेशमा भएले प्रतिवादी बनाइएका नेताहरु कसैको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दावी गरे । शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ती मुद्दा नटुङ्ग्याए द्वन्द्व चर्किने खड्काले बताए ।
प्रचण्ड, बादल र गोपाल किरातीको नाम
मुद्दामा बयान दिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुले यी सबै घटनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बादलको नाम मुछेका छन् । बयानमा उनीहरुको आदेशमा पार्टीले सफाया गरेको बताएका छन् । त्योबेला पार्टी नेतृत्वलेनै नैतिक जिम्मेवारी लिने भनेकाले यसरी बयान दिइएको एक नेताले बताए ।
एमाले नेता छविलाल कार्कीको हत्याको घटनाका प्रतिवादी माओवादी नेता नवराज वस्नेतले कार्कीको हत्या प्रचण्ड, बाबुराम र गोपाल किरातीको सल्लाहमा गरेको र घटनापछि उनीहरुले लामो समय सेल्टर दिएको बताएका थिए ।
ओखलढुंगाका उज्जन-गणेश, शिक्षक गुरु लुईटेल, प्रहरी हबल्दार पदम तामाङ र छविलाल कार्कीको हत्याका सबै घटनामा प्रतिवादीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई मुख्य दोषी भएको बयान गरेको विषय भने रहस्यमय छ ।
गुरु लुइटेलको हत्याको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका पोलिटव्यूरो सदस्य बाबुराम गौतमले भने-पार्टीको आदेशमा द्वन्द्वकालका सबै घटना भएका हुन् । त्यसका कमाण्डर अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तामा शासन गर्ने अनि हामी युद्ध गर्ने कार्यकर्ता जेल जाने ? यो हुन सक्दैन ।
गौतमले आफूहरु जेल जानुपर्ने भए पहिले केपी ओली देउवा, प्रचण्ड जेल जानु पर्ने तर्क गरे । गौतमले आफुहरु जनयुद्धकालीन मुद्दामा जेल जानु पर्ने भए अर्को घटना घटाएर मात्र जेल जान तयार रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् ।
बन्यो अदालत पीडित संघ
ओखलढुंगाका अधिकांश नेताहरु विरुद्ध मुद्दा चल्न थालेपछि गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा अदालत पीडित संघ समेत बनाएका छन् । तीन ओटै मुद्दा सर्वोच्चको आदेशपछि ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले ०६८ जेठ १७ गते मुल्तवीमा राखेको थियो ।
०७२ चैत १२ मा सर्वोच्चले कानुनसम्मत भएका कामकारवाही बदर गर्नु औचित्य पूर्ण नहुने फैसला गरेपछि मुद्दा पुनः ब्यूतिने भएकाले युद्धकालीन मुद्दाका प्रतिवादीहरुले गौतमको नेतृत्वमा अदालत पीडित संघ बनाए । संघको अगुवाइमा देशभर माओवादीको नेतृत्वमा विरोध प्रर्दशन र अदालत अगाडी नाराबाजी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका उनीहरुले मुद्दा अदालतमा अगाडी नबढ्ने आश्वास पाएका छन् । अदालतका एक अधिकृतले तत्काल यो प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा ओखलढुंगाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले जितेको थियो । क्षेत्र नम्बर १ बाट केशव राई र २ बाट बालकृष्ण ढुंगेल निर्वाचित भएका थिए । सांसद भएकै बेला उनीहरुको मुद्दा अघि बढाइएको थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा माओवादी पराजित भयो । अहिले दुवै पूर्व सांसद जिल्लामा सक्रिय छैनन् । जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व पूर्व मजदूर नेता बाबुराम गौतमले गरि रहेका छन् । उनी आफैं पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । पार्टी नेतृत्वले ओखलढुंगाको सन्दर्भमा नियोजित रुपमा ब्युँताइएको मुद्दा किनारा लगाउन पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।-अनलाइनखबर
1/30/2017 01:02:00 PM फोटो समाचार
बैंककस्थित नेपाली दूताबास आफ्नै भवनमा
1/30/2017 12:58:00 PM आर्थिक
थाइल्याण्ड,माघ १७ गते । बैंककस्थित नेपाली दूताबास आफ्नै भवनमा सरेको छ । सोमबार विहान थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत खगनाथ अधिकारीले नयाँ भबनमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरे ।
दूताबासले गत वर्ष जग्गा र नयाँ भवन किनेको थियो । र, त्यहाँ भिसा र कन्सुलर अफिससहितका केही संरचना थपेको छ ।
दूताबास भवन झण्डै चार रोपनी जग्गामा छ ।-अनलाइनखबर
राजधानीमा आगलागी: ४ सिलिन्डर विस्फोट, १० पसलमा आगलागी, करौडौंको क्षति
1/30/2017 12:51:00 PM समाचार
काठमाडौं, माघ १७ गते। कुलेश्वरको मिनी मार्केटमा आइतबार राती आगलागी हुदा करोडौंको क्षति भएको छ । मिनी मार्केट रहेको एउटा होटलमा बिजुलीको तार सर्ट भइ आगलागी हुदा होटलमा रहेको ग्यासमा आगो सल्केपछि भीषण रुप लिएको थियो ।
घना बस्तीको बाीचमा रहेको उक्त मार्केटमा आगलागी सुरु भएपछि सो क्षेत्रमा कोलाहल मच्चिएको थियो । आगलागीसँगै चारवटा सिलिन्डर एकसाथ विस्फोटन हुदा सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न किसिमका १० वटा पसलमा एकसाथ आगालागी भएको थियो । आगलागी भएको क्षेत्रमा सवारी साधनमा प्रयोग हुने टायरहरु घरम प्रयोग हुने कपडाहरु, सवारी साधनका पाटपुर्जाहरु तथा तीन वटा होटल अनि रेस्टुरेन्टहरु जलेर नष्ट भएका छन् ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि जुद्ध बारुण यनत्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १० वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो । आगो नियन्त्रण गर्न झन्डै दुई घण्टा लागेको थियो । आगालागीबाट मानवीय क्षति भने भएको छैन । करौडौंको भौतिक क्षति भएको र क्षतिको विवरण यकिन हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । यो आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।-
1/30/2017 12:39:00 PM समाचार , स्वास्थ्य
गौशाला- महोत्तरी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था औषधि अभावमा सुनसान देखिन थालेका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित स्वास्थ्यकर्मी बस्ने र निःशुल्क औषधि पाइने प्रचार गरिरहे पनि जिल्लाको अवस्था त्यस्तो छैन ।
औषधि हुँदा दिनहुँ तीे स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको भीड लाग्ने गर्दथ्यो । तर औषधि अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपस्थितिका कारण यहाँका स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा पाउन सर्वसाधारणलाई मुस्किल भएको छ ।
दैनिक सरदर ३०० भन्दा बढी बिरामी आउने जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावसँगै बिरामीको सङ्ख्या पनि घट्दो छ । रासस
1/30/2017 12:36:00 PM विश्व